Akụkọ - Usoro ọgwụgwọ
Wepu ahịhịa, ájá na akụkụ ndị na-abụghị ọgwụ. Dika ihe di iche iche di iche iche choro, ufodu kwesiri ka ha kpochapu akpukpo aru, dika nkpuru peony ọcha; ụfọdụ kwesịrị igbupụ ogbugbo ndị na-adịghị ike, dị ka okwuchi; ụfọdụ chọrọ iwepụ isi ahịhịa amị, mgbọrọgwụ fibrous na ihe fọdụrụ alaka na epupụta, wdg, wee mepụta nhazi ọkwa, dị ka achyranthes, green green Incense, Salvia, Angelica dahurica, Peucedanum, Shegan, Polygonum cuspidatum, wdg; ufodu aghaghi igbutu obi osisi, dika Danpi.
Amzụ ọkụ, esi mmiri, na ịchachasị ihe ọgwụ ụfọdụ nwere stachi ma ọ bụ carbohydrates na mucilage adịghị mfe nkụ. Alsofọdụ nwekwara enzymes nke na-emebi ma gbanwee ụfọdụ n'ime ha. Ọ bụrụ na ha dị ọkụ, enzyme ahụ ga-efunahụ ike ha. Debe ihe omuma nke ogwu n’enweghi nsogbu.
Materialsfọdụ ọgwụ ọgwụ rhizome, dịka Danshen, Angelica dahurica, Peucedanum, Achyranthes, Shegan, Polygonum cuspidatum, Phytolacca, Pueraria lobata, Tufuling, Scrophulariaceae, wdg. ; Mkpụrụ ọgwụ ndị mkpụrụ osisi na-adịghị mfe ihicha, dịka xuan pọọpọ, wayo, bergamot, wdg, kwesịrị ịbutu ụzọ tupu akpọọ; ogbugbo ọgwụ ihe ndị dị ka eucommia, magnolia, cinnamon, wdg kwesịkwara bee n'ime iberibe ma ọ bụ mpekere mgbe ha dị ọhụrụ. Gbanye na ọkpọkọ wee kpoo.
Ebumnuche nke ihicha bụ ịkwado nchekwa na iji ogologo oge, ma gbalịa idobe ọdịdị, isi na ihe na-arụsi ọrụ ike nke ọgwụ ọjọọ na-agbanwe agbanwe n'oge ihicha.
Jiri ìhè anyanwụ na ikuku n'èzí kpoo ahịhịa. Usoro ihicha anwu na adabara ndi ogwu nke n’achoghi agba ufodu ma ghara inwe mmanu ndi ozo dika coix, burdock, astragalus, paeonol, eucommia, wdg. Usoro ihicha anwu di nfe, ma odi iche ogwu. ihe nwere uzo di iche iche. Mgbe ị na-ehicha, a na-agbasasị ọgwụ ndị a na-egbute na akwa. Lezienụ anya iji gbochie mmiri ozuzo, igirigi, na igbochi ifufe ịgbasa, ma na-atụgharị ya iji kwalite mkpochapu oge.
Ghaa ọgwụ na ọgwụ dị ala site na iji nkụ ma ọ bụ olulu ọkụ iji kpoo ihe ọgwụ. Ekwesịrị ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ n'oge ihicha. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala, ọ dịghị mfe nkụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu, a ga-emetụta àgwà ahụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ nke rara n'ọkụ rhubarb abụghị ihe karịrị 60 ℃, ahụ afụ ga-agba ọchịchịrị ma dị mma ga-ebelata. Oke elu, dị ka ọnọdụ okpomọkụ nke ihicha okooko osisi ọlaọcha na-achịkwa na 38 ℃ -42 ℃.